Somaliland oo hakisay wada shaqayntii QM jeer aysan sharrixin sababta & dhibka ka iman kara | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somaliland oo hakisay wada shaqayntii QM jeer aysan sharrixin sababta & dhibka...
Somaliland oo hakisay wada shaqayntii QM jeer aysan sharrixin sababta & dhibka ka iman kara
(Hargaysa) 26 Okt 2020 – Somaliland ayaa hakisay dhamaanba howlihii aadminimo ee hoos tegayey mashaariicda QM balse ma aanay sharrixin duruufta keentay inay go’aankan qaataan.
“Wasaaradda Qorshayntu… Waxay hay’aadka QM la wadaagaysaa in ilaa amar dambe la hakiyey wada hadalkii iyo tashigii ku aaddanaa barnaamijyada ay QM dalka ka waddey,” ayaa lagu yiri qayb ka tirsan war kasoo baxay Wasiirka Qorshaynta Xasan Maxamed Cali.
Ma aysan sheegin sababta ay tillaabadan u qaadeen maadaama ay QM bixiso kharash badan iyo mashaariic wax tar u leh Somaliland oo ah maamul aan wax badan soo saarin aqoonsi caalami ahna aan haysan, balse waxaa jirta in DF Somalia iyo Somaliland ay inta badan isku khilaafaan sida deeqaha loo qaybinayo iyo in lasoo mariyo DF oo ay haatan kusoo dhacdo.
Somaliland ayaa marar badan sheegtay inay doonayso inay deequhu iyaga toos ugu soo dhacaan, iyagoo si la mid ah maamullada kale ee burburkii kaddib Somalia ka hana qaaday oo ay ku jirto DF Somalia, kaliya ku xisaabtama gargaar dibadeed, balse aan wax badan bulshada ugu qaban canshuuro fara badan oo ay qaadaan.
Lama hubo inay Somaliland buuxin karto booska QM iyo sida, iyadoo ay sidan ku hakinayso mashaariic anfacaysa dadka rayidka ah.
Previous articleFaransiiska oo kulaylka dareemay kaddib markii ay dalal Muslim ihi qaaddaceen badeecadiisa (Baaq uu catow ah)
Next articleXOG: Paul Pogba oo la sheegay inuu ka dhiidhinaya Islaam nacaybka Macron uu ka fariistay Xulka Faransiiska